» वाईल्ड कार्डबाट को पुग्छ फाईनलमा ?
वाईल्ड कार्डबाट को पुग्छ फाईनलमा ?
१९ चैत्र २०७६, बुधबार ०५:२०
मकवानपुर, १८ चैत । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ का उत्कृष्ट ४ प्रतियोगीहरु छानिएसँगै पून एकपटक उत्कृष्ट १० मा परेर बाहिरिएकाहरुले वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । गत बिहीबार प्रतियोगिताका उत्कृष्ट ४ प्रतियोगीहरुमा सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल, केविन ग्लान तामाङ र नेशन पुन मगर छानिएका थिए । त्यसपश्चात शुक्रबार वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीका लागि ५ जना प्रतियोगीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीका लागि रचना रिमाल, ममता गुरुङ, मिग्मा लामा, किरणकुमार भुजेल र मेघा श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।उत्कृष्ट १० मै परेकी मुस्कान रानाभाटले भने परिक्षाका कारण वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेकी छैनन् । यसअघि उत्कृष्ट ४ का लागि छानिएका प्रतियोगीहरुबाट भोटिङका आधारमा एकजना बाहिरिने र वाईल्डकार्डबाट एकजना रिईन्टर भएसँगै प्रतियोगिताका अन्तिम ४ फाईनालिष्टहरु तय हुनेछन् । तपाईको विचारमा यी ५ प्रतियोगीहरुमध्ये फाईनलमा पुग्ने प्रतियोगी को हुनेछ जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस भिडियो सामग्रीमा वाईल्डकार्ड ईन्ट्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका ५ प्रतियोगीहरुको वाईल्डकार्ड प्रस्तुति, उनीहरुले पाएका अवार्डहरु र उनीहरुका जीवनका कथाहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
१) रचना रिमाल– नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेकी पहिलो प्रतियोगी हुन् रचना रिमाल । गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेता पनि उनी उत्कृष्ट ७ प्रतियोगीहरु छनौटका क्रममा शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । उनी यस अघि उत्कृष्ट ८ मा सम्म पुगेकी प्रतियोगी हुन् । वाईल्डकार्डका लागि निकै नै तयारी गरेर आएकी रचनाले वाईल्डकार्ड राउण्डमा ‘किन बढ्दैछ’ ढुकढुकी मुटुको बोलको गीत गाएकी थिईन् । पहिलाका तुलनामा निकै सुधार गरेकी रचनाको प्रस्तुतिमा सबै निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । यसअघि कुनै पनि अवार्ड नजितेकी रचनाले वाईल्डकार्डमा राम्रो प्रस्तुति दिएकै कारण ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जित्न सफल भईन् ।
झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमाल १७ वर्षकी छिन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत रचनाले सानो छँदा मन्दिरमा भजन गाउँदै गायन यात्रा सुरु गरेकी थिईन् । कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दाको समयमा संगीतको कक्षामा भर्ना भए पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । उनको संगीत सिकाईको समय ४ महिनामा मात्र सिमित भयो । संगीतमै करियर बनाउने योजनामा रहेकी रचनालाई संगीतमा लगाव भएका कारण उनका आमाबुवाले समेत साथ दिएका छन् ।
२) ममता गुरुङ– नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेकी दोस्रो प्रतियोगी हुन् ममता गुरुङ । यसअघि उत्कृष्ट ९ सम्म पुगेर बाहिरिएकी ममता गुरुङ नेपाल आईडल सिजन ३ को मञ्चमा सबैको मन जित्न सफल प्रतियोगी हुन् । उत्कृष्ट ९ मा पुगेसँगै बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी ममता त्यसपछि शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । वाईल्डकार्ड राउण्डमा ममताले ‘मखमली चोलो चाहिँदैन’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । स्थायी भागमा माया पिरती गीतबाट सुरु गरेकी ममताले सुमधुर आवाजमा पून दर्शकको मन जित्न सफल भईन् । उनको प्रस्तुतिमा सबै निर्णायक र दर्शकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए ।
ममता गुरुङ १७ वर्षकी छिन् । रेडियो साराङकोटमा रेडियो जक्कीका रुपमा कार्यरत ममताले सानैदेखि बुवासँग संगीत सिकेकी हुन् । संगीत क्षेत्रमा नै संघर्षरत बुवाको पदचाप पछ्याउँदै अघि बढेकी ममता आफ्नो आमाबुवाको सपना पुरा गर्न चाहान्छिन् । कारणवश संगीत क्षेत्र छोड्न बाध्य भएका आफ्ना बुवाको अधुरो सपना उनी पुरा गर्न चाहान्छिन् । शास्त्रीय संगीतमा रुचि राख्ने ममताको संगीतको पहिलो गुरु नै उनको बुवा हुन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत ममता निरन्तर संगीतको शिखरतर्फ अग्रसर छिन् ।
३) मिग्मा लामा– नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेकी तेस्रो प्रतियोगी हुन् हेटौँडाकी मिग्मा लामा । मिग्माले नेपाल आईडलमा उत्कृष्ट १० सम्म पुगेर चर्चा कमाएकी थिईन् । उत्कृष्ट १० को प्रस्तुतिका क्रममा प्रविण बेड्वालसँग युगल प्रस्तुति दिएकी मिग्माले पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेता पनि उनी शोबाट बाहिरिएकी थिईन् । शोबाट बाहिरिएपछि उनले एउटा डुयटका साथै एउटा सोलो गीत पनि रेकर्ड गराएकी छिन् । वाईल्ड कार्ड राउण्डमा मिग्माले ‘थाहा छैन’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । रकिङ प्रस्तुति दिएकी मिग्मालाई सबै निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए ।
उनले प्रतियोगितामा ३ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । मिग्माले पियानो राउण्डमा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द उईक अवार्ड, गाला राउण्डको दोस्रो हप्ता मेघा श्रेष्ठसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पफोमेन्स अफ द डे अवार्ड र उत्कृष्ट ९ छनौटका क्रममा प्रविण बेड्वालसँगै कोकाकोला अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेकी थिईन् । नेपाल आईडलको स्टेजमा रक स्टारको छवि बनाएकी मिग्मा लामाले आफुलाई मेलोडी क्विनका रुपमा समेत प्रस्तुत गरेकी छिन् । २१ वर्षीया मिग्मा स्केचेच ब्याण्डमा आवद्ध छिन् । साँगितिक आकासमा चम्कँदै गरेकी मिङ्माले केही गायन प्रतियोगिताहरुमा भाग लिनुका साथै केही कभर तथा ओरिजिनल गीतहरु समेत गाएकी छिन् । स्कुल पढ्दाको समयदेखि नै विद्यालयस्तरमा हुने गायन प्रतियोगिता तथा हेटौँडाका विभिन्न कन्सर्टहरुमा समेत सक्रिय सहभागी भएकी मिग्माले औपचारिक रुपमा ३ महिनाको मात्र संगीतको कोर्ष गरेकी छिन् । हाल स्नातक अध्ययनरत मिग्मा कुनै समय विभिन्न लाईभ कार्यक्रमहरुमा समेत सहभागी हुन्थिन् । उनले भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो सिजनमा पनि सहभागिता जनाएकी थिईन् । मिग्मा सँगीतलाई आत्माविश्वास बढाउने मेडिटेसनको रुपमा परिभाषित गर्छिन् ।
४) किरण कुमार भुजेल– नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेका चौथो प्रतियोगी हुन् किरण कुमार भुजेल । नेपाल आईडलको स्टेजमा भर्सटाईल सिंगरका रुपमा ख्याति कमाएका किरण यसअघि नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ सम्म पुगेका थिए । वाईल्ड कार्ड राउण्डमा किरणले ‘नेपाली बाबु’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा सबै निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन पनि दिएका थिए । उनले शोही प्रस्तुतिबाट अवार्ड समेत जितेका छन् । किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ४ वटा अवार्ड जितेका छन् । गाला राउण्डको दोस्रो हप्ताको शुक्रबार उनले ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड जितेका थिए । त्यस्तै उनले गाला राउण्डको पाँचौँ हप्ता उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुतिका क्रममा केविन ग्लानसँगै संयुक्त रुपमा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र गाला राउण्डको छैटौँ हप्ता उनले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । उनले वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीको प्रस्तुतिका क्रममा पून कोकाकोला अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेका थिए ।
२६ वर्षीय किरण महोत्तरीको बर्दिवास निवासी हुन् । अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै उनले गीत गाएको अनुभव छ । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरण एसएलसी सकाएपछि वि.सं. २०६५ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । ५० वटाभन्दा बढी गीतहरुमा आवाज दिईसकेका किरण अहिले जे ब्याण्डमा आवद्ध छन् ।
५) मेघा श्रेष्ठ– नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्डकार्डका लागि भिडेका पाँचौँ प्रतियोगी हुन् मेघा श्रेष्ठ । सिजन ३ की एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा यसअघि उत्कृष्ट ५ सम्म पुगेकी थिईन् । वाईल्ड कार्ड राउण्डमा मेघाले ‘हिमाली’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । रकिङ प्रस्तुति दिएकी मेघालाई सबै निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । उनले शोही प्रस्तुतिबाट एउटा अवार्ड थप गर्न सफल भएकी छिन् ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् मेघा श्रेष्ठ । मेघाले गोल्डेन माईकसँगै गाला राउण्डमा ८ वटा अवार्ड जितेकी छिन् । मेघाले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको दोस्रो हप्ता मिग्मा लामासँगको जोडी प्रस्तुतिमा र तेस्रो हप्ता नेशन पुन मगरसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा उनले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । तेस्रो हप्ता नै उनले रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेकी थिईन् । उनले चौथो हप्ता केविन ग्लान तामाङ, सज्जा चौलागाई र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको छैटौँ हप्ता उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा उनले बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् । उनले गाला राउण्डको आठौँ हप्ता उत्कृष्ट ५ को प्रस्तुतिका क्रममा पनि बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड नै जितेकी थिईन् । साथै उनले वाईल्ड कार्ड राउण्डमा सज्जा चौलागाईसँगै रेस्पेक्ट पफोर्मेस अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् ।
२४ वर्षीया मेघा काठमाडौँ बसुन्धारामा बस्छिन् । मेघा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दाको समयदेखि नै सँगीत क्षेत्रमा सक्रिय थिईन् । विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा सहभागी भएर पुरस्कार समेत जितेकी मेघाले १५ वर्षको उमेरमा भ्वाईस अफ टिनमा समेत सहभागिता जनाएकी थिईन् । संगीतलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अंग भन्न रुचाउने मेघाले ‘उमन ईन कन्सर्ट’ नामक प्रतियोगितमाा ट्यालेन्ट हन्टको उपाधी जितेकी थिईन् । उक्त शोकी आयोजक गायिका अभाया सुब्बाले नै उनलाई गायन कलामा अब्बल हुने तरिकाहरु सिकाएको मेघा बताउँछिन् । मेघाले औपचारिक रुपमा संगीत भने सिकेकी छैनन् । उनी आफ्नी आमालाई जीवनको पिल्लरको रुपमा परिभाषित गर्छिन् । संगीत यात्रामा आफन्तको पनि साथ पाएकी मेघाको हजुरबुवा विभिन्न बाजाहरु बजाउन सिपालु छन् । उनका आमा र बुवा पनि गीतसँगीतमा रुचि राख्छन् । मेघालाई उनकी आमाले नै नेपाल आईडलमा भाग लिन प्रेरणा दिएकी हुन् । फुडमाण्डुमा कार्यरत मेघाले औपचारिक अध्ययन समेत पुरा गरिसकेकी छिन् ।